“Waa inaan hadiyad kaga dhignaa koobka Europa League Henrikh Mkhitaryan” – Sokratis – Gool FM
“Waa inaan hadiyad kaga dhignaa koobka Europa League Henrikh Mkhitaryan” – Sokratis
(London) 27 Maajo 2019. Daafaca kooxda Arsenal Sokratis ayaa ugu baaqay saaxiibadiis inay u dagaalamaan ku guuleysiga koobka UEFA Europa League, si ay ugu hadiyadeeyaan saaxiibkood Henrikh Mkhitaryan.
Xiddiga khadka dhexe xulka qaranka Armenia ee Henrikh Mkhitaryan ayaan u safrin magaalada Baku ee caasimada Azerbaijan, sababo la xiriira dhinaca ammaanka, maadaama ay xiisad siyaasadeed ka dhaxeeyso labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia.
Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa bari oo Arbaco ah ku wada ciyaari doono magaalada Baku ee caasimada Azerbaijan finalka UEFA Europa League.
Hadaba daafaca kooxda Arsenal ee Sokratis ayaa wuxuu ka hadlay ka maqnaanshiyaha Henrikh Mkhitaryan kulanka habeen dambe ee finalka Europa League wuxuuna yiri:
“Dabcan, waxay inoo tahay guuldaro weyn anaga ahaan, waan murugeysanahay, balse waa inaan u guuleysanaa isaga dartiis”.
“Waa inaan halkaas aadno oo aan ciyaarnaa cayaaraheena, waxaan qabaa inaan sidaas sameyn karno, waxaan qabaa hadii aan soo bandhigno qaab ciyaareed 100% ah isla markaana aan qaadano maalin aad u wanaagsan, nasiibkana uu na saacido, maadaama uu hal kulan yahay, wax walba ayaa dhici kara, sidaas darteed, waan sameyn karnaa”.
Zidane oo ka hadlay wararka ku aadan ka tagitaanka kooxda Real Madrid ee kabtan Sergio Ramos